100% silig sanka PP
Dhar dhalaalaya dhalaalay
Maro miiq ah
Koollo dhalaalid kulul
Dareem kulul kulul
Cadaadiska Cadaadiska Xasaasiga ah
EVA ama PO koollo dhalaalid kulul
Gawaarida dhalaaliya kululeeyaha marinnada
Tuubada xabagta dhalaalka kulul
Codsadaha dhalaalida kululaynta
Dhalasho kulul oo dhalaalaya xabagta
Mashiinka xabagta dhalaaliya ee caadiga ah
PUR dhalaalaya badan
Maaskaro silig sanka
N95 silig sanka
Maaskaro fidsan silig sanka ah
Hoyga > Wararka > Warka Warshadaha > Maxay yihiin faa'iidooyinka 100% PP silig sanka caag ah?
Maxay yihiin faa'iidooyinka 100% PP silig sanka caag ah?
Sanadka 2020, markasta oo ay dhacdo COVID-19, baahida dadka ee wajiyadu aad ayey u kordhay, taas oo kordhisay tirada soo saarayaasha qalabka maaskaro"buundada sanka", iyo qiimaha dhammaan waxyaabaha la xiriira maaskarada iyo qalabkuba way ku kordhin doonaan. Marka la eego qiimaha iyo waxtarka waxqabadka, tirada buundooyinka cusub ee xalka qalabka maaddada 'synthetic solution' ayaa aad u weyn muddada yar. Si kastaba ha noqotee, marka laga eego ilaalinta deegaanka iyo dib u warshadaynta walxaha,100% caag PPsanka sankayeelan doonaan awood badan suuqa mustaqbalka.
1. 100% silig sanka caag ah oo caag ah bir ma leh, kaliya pwax la soo dhaafay. Marka laga eego aragtida dib-u-warshadaynta, looma baahna in la kala saaro siligga birta ah iyo qalabka caagga ah, oo si toos ah ayaa loo dhalaaliyaa loona isticmaalay, taas oo aad ugu habboon;
2. Waqtigaan la joogo, walxaha caaga ah ee sida caadiga ah loo isticmaalo waa PE, PP, iwm. Qalabkaani wuxuu leeyahay astaamo isku mid ah. Marka la barbardhigo adkaanta iyo ballaadhinta, PP way ka fiican tahay PE. Xulashada qalabka loo yaqaan 'PP' ee wax soo saarka buundada sanka ayaa aad ugu habboon oo deegaanka u habboon. Isla mar ahaantaana, qaar ka mid ah soosaarayaasha maaddada ayaa ka dhigaya qaar ka mid ah masterbatch filler PP, taas oo siin doonta ciyaar ka fiican faa'iido darrooyinka qalabka PP.
Foosha marka la eego, nolol maalmeedkeenna, shaqo wanaagsan oo ilaalin shakhsi ah, in badan gacmaha iska dhaq, lana ilaaliyo caadooyinka nadaafadda ee wanaagsan, kor u qaadista jir dhiska iyo xasaanadda, ilaalinta nadaafadda iyo hawo qaadka, kor u qaadista jir ahaaneed iyo xasaanadda, cun cunno dheellitiran, jimicsisi dhexdhexaad ah, U shaqee oo naso si joogto ah si looga fogaado daal badan
Hore:Maxay yihiin noocyada siligga buundada sanka?
Xiga:Dhibaatooyinka soo food saaray adeegsiga siligga sanka iyo xalka
 Aagga Warshadaha Jincun, Jiangdong Street, Yiwu City, Gobolka Zhejiang
Right Xuquuqda daabacaadda Teknolojiyada 2020-2021 (Zhejiang) Co., Ltd.